R/Wasaaraha oo si wayn loogu soo dhaweeyay Galmudug (SAWIRRO) – AfmoNews
R/Wasaaraha oo si wayn loogu soo dhaweeyay Galmudug (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa si diirran u soo dhaweeyey Madaxda Dowlad Gobolleedka Galmudug masuuliyiin iyo dadweyne kale.
Safarkan uu ku yimid Ra’iisul Wasaare Rooble magaalada Dhuusamareeb ayaa qeyb ka ah socdaal uu ku marayay Dowlad Gobolleedyada oo diirradda lagu saarayay wadashaqeynta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, arrimaha doorashooyinka, amniga, horumarinnta adeegyda bulshada iyo qodobbo kale.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inta uu joogo deegaannada Galmudug inuu latashiyo kala duwan la sameynayo madxda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, si loogu kaabo dowlad dhisidda iyo adkeynta isku xirka hay’adaha federaalka iy dowlad gobolleedka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa uga mahadceliyey Madaxda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta diirran ee loo sameeyey, waxuna sheegay in Xukuumaddiisu ahmiyadda koowaad siinayo sidii bulshada loogu dhaweyn lahaa dowladnimada.
Shirka Golaha Wasiirrada oo lagu ansixiyey Guddiga Maamulka Hay’adda Qaran ee Naafada –
Magaalada Muqdisho oo laga dhigey banaanbax looga soo horjeedo dilkii Guddoomiye Dhagajuun –
Mid ka mida askartii dishay Gudoomiye Dhegajuun oo baxsaday
Dowlada Ingiriiska oo ugu baaqday Dowlada Federalka in heshiis la gaarto Dowlad goboleedyada –
Wasiir Beyle oo maanta booqday Safaaradda Turkiga ee Muqdisho
Joe Biden oo bilaabay wax ka bedelka siyaasadihii Trump iyo Soomaalida oo soo dhaweysay